FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA LABROTTIE - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Labrottie
Alika mifangaro mifangaro i Labrador Retriever / Rottweiler
Izahay no Labrottie— 'Lab ny reniny, Rottweiler ny rainy. Nahazo ny toetran'ny saka anefa izy. '
Ny alika Labrottie dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Labrador retriever ary ny Rottweiler . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Ity lakroa hybrid ity dia eken'ny American Canine Hybrid Club ho Labrottie. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Drafitra mpamorona endrika = Labweiller na Labrottie
Mpanoratra International Canine Registry®= Labrottie
'Ginger dia fangaro Rotti / Lab, aseho eto amin'ny 2 taona. Efa tena hyper be tamin'ny ankamaroan'ny fiainany , fa efa nilamina anefa izy hatramin'ny nahazoany alika kely! Tiany ny olona sy ny zanako lahy 18 volana! Mizara ny zava-drehetra izy ireo. Tian'i Ginger koa ny anay saka ! Ny toetrany dia TSY masiaka ary tena mamy izy. Miantso azy hoe Tigger izahay satria tsy nandeha an-tongotra mihitsy izy fa nivily lalana fotsiny! Izy no Rotti lehibe indrindra sy mahafinaritra indrindra fantatro! Manana ny fahazaran-dratsy ny te hihinana hatrany izy !!!! Afaka mihinana mandra-pibontsina ny kibony! Ny alika mpitari-dalana izay nampiofaninay dia hanao izany koa, koa mieritreritra aho fa toetra Lab izany. Miantsoantso mafy koa izy! Te-hijery bebe kokoa momba ny Dog Whisperer aho, saingy tsy manana tariby izahay :(. Nampihatra ny tendrony hanana ny 'habakabakao manokana' aho. Nitsambikina tamin'ny rehetra sy ny varavarana any aoriana i Ginger! Fa nanandrana ny nitsambikiny aho teknika ary manana izy nitsahatra tsy nitsambikina olona ary ny zavatra! '
Ginger ny rotti / Lab mifangaro amin'ny alika kely
'Ny alikako Pounder dia alika kely 11 taona lasa izay. Na dia mivadika volondavenona kely aza izy dia mbola mitsambikimbikina toa ny kangoroa ary afaka mizana fefy 6 metatra. Nanolo-tena tanteraka ho ahy izy ary mahay mandanjalanja. Nofaniko tany am-boalohany izy mba hanome baiko sy famantarana famantarana tanana. Azoko atao ny mitondra azy saika na aiza na aiza tsy misy famatahana. Indray mandeha, dia nandalo ny sekoly fanabeazana fototra teo an-toerana izahay, tahaka ny namoahan'izy ireo ny andro. Ny làlana dia nilahatra tamina reny miandry haka ny zanany ary Pounder dia tsy teo am-pandrika. Nanomboka namerina tsimoramora ny baiko 'niaraka tamiko' aho rehefa nomeko azy ny famantarana ny tanany. Nianjera teo akaikiko izy ary nandritra ny 50 metatra manaraka dia tsy nanary izy na dia teo aza ireo mpianatra kilasy faha-2 sy faha-3 nikiakiaka ary nanao petting sy patting marobe. Tsy dia reharehako mihitsy izy ary azoko antoka fa misy reny sasany mijery fa talanjona. Ity sary ity dia nalaina 3 taona lasa izay tao amin'ny doany fanjonoana ankafiziny indrindra izay nahafahany nandositra nanenjika ny Kong-on-a-tady. Tamin'ny andro talohan'ny fakantsary nomerika dia tsy maintsy naka horonan-tsary feno aho nanantena ny hahazo ny sary tsara. Ity no hany sary teo amin'ny horonan-taratasy nivoaka marina. Tiako ny Dog Whisperer ary efa nampiditra foto-kevitra mitovy amin'ny fitondran-tena tao amin'ny fampiofanana an'i Pounder. Tiako ny mamadika ny namako amin'ny fomban'i Cesar mba hahafahan'ny alikany miroborobo. '
Alika mifangaro Belle the Rottie / Lab amin'ny taona 3 - 'Ny reniny no Rottie, ny dad no Lab. Miasa amin'ny laboratoara rehetra izy. '
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Labrottie
Sary Labrottie 1
chihuahua jack russell terrier mix alika kely
shar pei pitbull mix alika kely
volo fohy spaniel amerikana akoho amerikana
manao ahoana ny alika 20 kilao
Chihuahua yorkie afangaro efa lehibe feno
karazany samy hafa firenena amboa mpiandry ondry alemaina